Toogasho saakay lagu fuliyay Xubin ka tirsanaa Shabaab. – Hornafrik Media Network
Toogasho saakay lagu fuliyay Xubin ka tirsanaa Shabaab.
Muqdisho (Hornafrik)- Saakay waxaa dil toogasho ah lagu fuliyay Cabduqaadir Abuukar Shaacir Maxamed oo ku eeedesnaa inuu ka dambeeyay qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay magaalada muqdisho kuwaa oo ay ka dhasheen qasaaro kala duwan.
Ninka la toogtay oo ay horay maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xakuntay dilka toogashada ah ayaa lagu sheegay inuu ka dambeeyay qaraxyo ka dhacay kasoo horjeedka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, Hotel Wehliye, baar itaaliya iyo waliba gaari qarax siday oo la dhigay xarunta Eeneeyo ee degmada Xamar weyne.
Ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa bartamaha sanadkii tagay ee 2017 ka waxaa ay ka qabteen Cabduqaadir Abuukar Shaacir Maxamed degmada Xamar weyne, waxaana xiligaasi la sheegay inuu waday gaari ay ku raranyihiin walxaha qarxa.
Intaaa kaddib ayaa waxaa la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya dhageysiga dacwadiisa kadib ayaa waxaa lagu xakumay dil toogasho ah, saakayne waa lagu fuliyay.
Dhowr jeer oo hore ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya rag ka tirsanaa Al-shabaab oo ay xakun dil ah ay ku riday sidan oo kale dilka toogashada ah loogu fuliyay
Al-Shabaab iyo Daacish oo ku dagaalamay Gedo.